Iwu usoro iwu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: iwu iwu
kedu ihe edere nke CodeN Criminal Code 51 RF
na maka akwụkwọ nke Criminal Code of 51 nke Russian Federation m bu n'uche ka akwụkwọ 51 nke Iwu nke Russian Federation na-enye ikike ịghara ịgba akaebe megide onwe ha, ndị ha hụrụ n'anya, bụ ndị Iwu nke Russian Federation depụtara gburugburu ya. Code Criminal Code 51. Mgbochi ...
Kedu ọrụ na ikike nke ndị na-ekiri na ntuli aka na Russian Federation?
Kedu ihe bụ ọrụ na ikike nke ndị na-ahụ maka ntuli aka na Russian Federation? Na-ekiri. . Hota imi gị .. Ndị na-eme ntuli aka ... Onye na-ekiri nwere ikike: - ka ị mata ndepụta ndị ịtụ vootu; -amịnye ebe a na-eme ntuli aka nke ntuli aka dị mkpa ...
kwụọ ụgwọ - ihe okwu a pụtara
nkwụghachi ụgwọ - ihe okwu a pụtara Na ikike; nkwụghachi ego; nkwụghachi ụgwọ maka mmebi; Nkwụghachi ụgwọ maka ikike anaghị eji ya eme ihe; Ofzọ ịkwụghachi ụgwọ dịịrị onye ọrụ site na ịbelata ihe nkwupụta nke onye ji ya ụgwọ na onye ji ya ụgwọ; Ntinye ego na onu ego…
Kedu akwụkwọ na-ekwu na Russia bụ onye ga-anọchi USSR?
Kedu akwụkwọ na-ekwu na Russia bụ onye ga-anọchi USSR? Na Jenụwarị 13, 1992, Ministrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ofufe Russia zigara ndị isi nke ndị nnọchi anya gọọmentị na Moscow na-ekwupụta na Russian Federation na-aga n'ihu itinye ...
Ndi ndi isi nke Russia na-emetụta?
Ndi ndi isi nke Russia na-emetụta? Chineke m, gini ka gi onwe gi bu onye nweayi ... Ọfọn, ọ na-esiri nnọọ ike inweta akwụkwọ ahụ ma gbasaa na Iwu nke Russian Federation? Nkeji edemede 71 nke Iwu ...
Banyere ọnọdụ ọha na eze na ndị ọrụ obodo
Banyere ọrụ gọọmentị na ndị ọrụ gọọmentị mba mba. onye oru nkịtị abughi onye oru nkịtị, ebe onye ji ọhaneze bụ. “Nkeji edemede 3. Ọnọdụ obodo…
echiche banyere Iwu Iwu nke Russia, isiokwu ya na isi mmalite ya.
echiche nke Iwu Iwu nke Russian Federation, isiokwu ya na isi mmalite ya. Iwu usoro iwu bụ ngalaba nke na-ahazi nhazi nke ike steeti na mba, ihe bụ isi bụ iji ikike a, mmekọrịta dị n’etiti steeti na nwa amaala, na…
President bụ onye na-akwado iwu ahụ?
President bụ onye na-akwado iwu ahụ? Ee dika iwu, ee! Isi 4. President nke Russian Federation Nkeji edemede 80 1. Onyeisi nke Russia Federation bụ isi obodo. 2. Onyeisi nke Russia Federation bụ onye na-akwado iwu nke Russian Federation, ...
N'ọnọdụ dị aṅaa ka President nke Russia Federation nwere ikike iwu kwadoro State Duma?
N'ọnọdụ dị aṅaa ka President nke Russia Federation nwere ikike iwu kwadoro State Duma? N'okwu a, ọ ka mma iji isi mmalite. Ka anyi chigharia n'usoro Iwu nke Russian Federation 1. Ndi isi ochichi nke Duma nwere ike gbasaa ya.
nkọwa ziri ezi na nkọwa-nkọwa nke paragraf nke X.NUMX Nkeji edemede 4 nke Iwu nke Russian Federation?
nkọwa ziri ezi na nkọwa-nkọwa nke paragraf nke X.NUMX Nkeji edemede 4 nke Iwu nke Russian Federation? Iwu nke Russian Federation enweghị ike imegide iwu a na-ahụkarị nke iwu mba ụwa. Ma ọ bụghị ya, ha ezighi ezi 15. A maara nke ọma na ụkpụrụ na norms int. ikike, ...
Ndepụta nke posts ndị isi nke Russia Federation nominated
Ndepụta nke posts ndị President nke Russia Federation nomination Nkeji edemede 83 nke RF Constitution The President of the Russian Federation: a) na-akwado, na nkwenye nke State Duma, onyeisi oche nke gọọmentị nke Russia Federation; d) na-anọchite anya State Duma ...
Ike ọchịchị. anyị nwere Assembly nke United States. kedu ajụjụ ndị ọzọ a ga - enwe?) Na Russia, a na - anọchite anya nzuko omeiwu nke United States, nke gụnyere obodo Duma na Council Council, n'ógbè ...
Ike nke Ụlọikpe Iwu nke Russia
Ike nke thelọikpe Iwu Iwu nke Russian Federation Federal Iwu Iwu "N'ụlọ akwụkwọ iwu nke Russian Federation" Nkeji edemede 1: Courtlọ ikpe iwu nke Russian Federation bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụle nke usoro iwu, na-ejikwa onwe ya na-egosipụta ikike ikpe site na usoro iwu…
49 na edemede
Nkeji edemede 49 na isiokwu nke iwu nke Russian Federation Art. 49 Echiche nke ịdị ọcha; AIC RF nkà. 49 Na-agbanwe ndabere ma ọ bụ isiokwu nke nkwupụta ahụ, na-agbanwe nha nke nkwupụta ahụ, ịjụ ịrụ ọrụ, nnata nke nkwupụta ahụ, ụwa ...
24 Nkeji edemede nke iwu Russia
Iwu nke 24 nke Iwu nke Russian Federation dị na paragraf nke 2 nke Art. Iwu 24 nke iwu Russia “Ndị ọchịchị obodo na ndị nwe obodo, ndị isi ha ji ụgwọ inye onye ọ bụla ohere ịmata akwụkwọ na ihe, ...
Kọwaa nkeji nke usoro ntuli aka na nkọwa nke onye ọ bụla
Ihe na 22.08.2017 18.09.2018
Kọwaa nkeji nke usoro ntuli aka ahụ, na-akọwa nkọwa nke onye ọ bụla nhoputa nhoputa nke iwu nke iwu nke nzukọ na omume nke ntuli aka. Ọ mejupụtara nkeji nke onwe, nke dị iche na nke ọ bụla n'ime ọrụ, gburugburu ...
Kedu ụdị nhazi obodo nke Russia na-agbanye n'ime Iwu? O juru m anya
Kedu ụdị ala ala Russia dị na Iwu Iwu? Akpata m federaal, mana ị na-awụ akpata oyi? Isiokwu na-adọrọ mmasị! Nkeji edemede 1 1. Russian Federation - Russia ...
Ụdị ikike na nnwere onwe dị iche iche nke mmadụ na nwa amaala. Nyere m aka ịchọta azịza.
Ụdị ikike na nnwere onwe dị iche iche nke mmadụ na nwa amaala. Nyere m aka ịchọta azịza. Ihe ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu ha na ndi mmadu ha na ndi mmadu abughi ndi mmadu di iche iche abughi ndi ozo.
Onye na-azụ ahịa ahụ ọ ga-alaghachi akwụkwọ ahịa ahụ n'ụlọ ahịa ahụ?
Onye na-azụ ahịa ahụ ọ ga-alaghachi akwụkwọ ahịa ahụ n'ụlọ ahịa ahụ? Ndepụta akwụkwọ maka ego, ọ dị mwute, anaghị arụ ọrụ. Akwụkwọ onyinye bụ akwụkwọ nke na-akwado ọrụ nke ụlọ ọrụ iji nyefee na ndị na-ebu ngwaahịa ya maka ego ya na ...
Wepụ JSC na CJSC ugbu a. Kama, OA pụtara.
Wepụ JSC na CJSC ugbu a. Kama, OA pụtara. Nke bụ eziokwu bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke OJSC, n'agbanyeghị usoro nhazi na iwu ya, na-abụkarị ndị ụlọ ọrụ ọha na eze. Ha anaghị ...